Ukuqhumisa kwakho kwakungekho nje ukuthakazelisa, kodwa kuncedo, khetha i-perfume yemvelo kwioli efunekayo, kwaye siya kukuxelela indlela yokwenza ngayo. Ukukhetha isiqhumiso esitsha, kaninzi asikucingi malunga nokuba luncedo njani kwaye ukhuselekile ngephunga elimnandi. Imbonakalo yomuntu siqu ivela phambili: "Ndiyayithanda - andiyithandi", umfanekiso, uphawu, ukuqina, ukupakisha ... Asiyi kugxekisa iinambuzane eziqhelekileyo kunye nezindlu ezihloniphekileyo, kodwa iziphumo zezifundo ezizimeleyo zisenza sikwazi ukuthuthuzela izigqibo. Ngeendlela ezininzi, ukhetho lweziqhumiso luxhomekeke kumnandi weoli efunekayo, kuba unikela ubuqhetseba obumnandi. Ngako oko, amaninzi amaninzi anamhlanje afumana amafutha anesisombululo esichaza ukuvumba kwamanzi, kunye nama-amplifiers, i-fixers, idayi kunye nezinye "iitelesi" ezingenayo impembelelo enhle kwimpilo, ebangela ingxaki evela kwiintsholongwane ukuya kwiingxaki zokuphefumula. Ngokomzekelo, ama-phthalates - amacandelo anokunyusa isenzo se-perfume angabangela i-pathologies kwinkqubo yokuzala.
Ukuthandwa yizinto eziphathekayo
Isiseko sempepho yendalo isetyenziselwa utywala, amanzi ahlambulukileyo ukusuka kwimithombo yeentaba kunye ne-100% ezibalulekileyo ezibalulekileyo, ezifumaneka ngaphandle kokuthatha inxaxheba kweemichiza zamachiza. I-flavour e zendalo zomeko ezinzima kakhulu. Ezinye zazo azikwazi ukuhlanganiswa ngokufanelekileyo, umzekelo, iphunga le-jasmine liye laphindiswa ngokupheleleyo kwiibhubhoratri.
Kwimpepho engokwemvelo ngaphezu kwe-oyile ye-oyile ebalulekileyo, ngoko kunye neqhumiso ufumana yonke into evuyisayo ye-aromatherapy. Eli qhumiso aligcini nje lincinci, kodwa liyakwandisa imizwelo, inciphisa uxinzelelo, ukukhathala, kuphucula inhlalakahle, kukhuthaza ingqwalasela, imemori, i-tons up, okanye, ngokuchaseneyo, iyabuyisa kwakhona.
Iingcali zamatye amaninzi aziwayo zikholelwa ukuba ukukhethwa kweziqholo kuxhomekeke kwiimpepho zamafutha abalulekileyo, kungenxa yoko bazama ukubenza ngemibala yemvelo.
Amafutha abalulekileyo asebenzisana novumba lomzimba kwaye "alala" ngamnye, kuzo zonke iindlela ezahlukeneyo. Kuya kuba yinto ekhethekileyo, ikhethekileyo neyodwa.
Iifutha zendalo zikhawuleza zikhutshwe: akukho zilungiso zokufakelwa kuzo. Iphunga liyamnandi, kodwa lithe ngqo. Akuyena wonke umntu onokuthanda ukuvumba, umzekelo, ii-almond okanye umhlonyane.
Iphunga elimnandi nelithandane, iphunga leentyatyambo - i-feminine.
1. I-Atrisan Parfumeur L'Eau Deatamansi isekelwe kwioli efunekayo ye-rose kunye ne-ylang-ylang, isiphumo esichukumisayo, esichukumisayo.
2. Dawn Spencer Hurwitz Pamplemousse En Plus - iziqhamo kunye neentyatyambo: i-vanilla orchid, i-mandarin orange eluhlaza.
3. I-Ranee "i-Empress Eugene" - i-fragrance e-fresh-floral-oody kunye namanqaku e-sandalwood, kunye ne-lily ye-valley, i-bergamot, i-rose, i-violet, i-jasmine, i-magnolia.
1. Ukuba uvakalelwa ukuphazamiseka, khetha u-"obala" ococekileyo ococekileyo kunye neziqhamo eziqinileyo. Ukunyusela, ukuvuselela kunye nokuvuselela i-oyile ebalulekileyo ye-orange, i-grapefruit kunye neoli ye-rose.
2. Iimvakalelo zobubele zibangelwa i-lavender, i-jasmine, i-bergamot, i-ylang-ylang, kunye ne-vanilla kunye nomsedare.
3. Ukuchasana noxinzelelo kunye nokwandisa ukuzithemba, sincoma ukuhlanganiswa kweengcingo zomjunipha, i-cypress, umsedare, i-sandalwood, i-bergamot kunye namanqaku e-coniferous.
4. Ngentsasa sebenzisa iziqhumiso ezinamandla, kwaye ngokuhlwa-ukuphucula. Ukuphucula impembelelo yokwelapha, ukukhanyisa i-aroma-candle okanye i-smoker ne-smell ngefumba lelo hlobo.
Ama-aromas aseMpumalanga, ama- spicy kunye nama-sexy kunye namanqaku e-musk, i-vanilla kunye neentyantyambo ezinomsila okhulu kakhulu uya kutshabalalisa ukunyusa nokunyusa isitifiketi sengqondo.
6. Qinisekisa ukuba iphunga eliqhumayo lizalisekisa lakho, kwaye aliyikuphazamisa. Iimimoya "ngephunga eliphikisanayo" likunika ulwazi olungalunganga xa uqondwa ngomnye umntu. Ukuba isikhumba sakho sidlula i-musky note, sebenzisa i-flavored flavors. Ukuba ukuvumba kwakho kwendalo kukumnandi, uzakusebenzisa iziqhumiso ezinzima kakhulu, ezinomhlaba.
7. I-Perfume ne-high concentration ye- oyile ye- aroma isetyenziswe kumaphupha epulisa-apho umzimba ofudumeleyo usasazeka khona i-hamburg (i-wrists, ecaleni lomgca, i-collarbone, i-nape, i-nevel, ephakathi kwamabele).
8. I-Citrus perfumes yandisa ubukhulu besikhumba kwi-ultraviolet, ngoko ke, xa uhamba kwi-solarium okanye kusebe lolwandle, akukhuthazwa ukuba uwasebenzise.
Unyaka Wezingane: Amasiko kunye neSikhumbuzo
Indlela yokufunda indlela yokugcina imali kunye nokucwangcisa iindleko
Indlela yokujonga umgangatho wobusi kwikhaya
Indlela yokuba ngumfazi wendlu efanelekileyo?
Ukungakhuselekanga ngexesha lokukhulelwa
Iingcebiso ezintle kunye neendlela zokubhiyozela uNyaka omtsha!
Umsizi weMvana waseScottish Shepherd
Indlela yokugcina umbala weenwele ezidaywe
Indlela yovuyisana nabasetyhini kunye nabo ngo-8 Matshi, ngo-2018
Indlela yokusinda kwiingxaki, iingcebiso zeengqondo
Siya kumkholisa uSomkhulu Frost: iimbongo ezintle kunye nezilula zonyaka omtsha zabantwana